ICC ဖလားနဲ့ မန်ယူအောင်ပွဲခံနိုင်ဖို့ဆိုရင် မီလန်နဲ့ပွဲမှာ ဘယ်ရလဒ်လိုအပ်နေတာလဲ…?
August 2, 2019 Htin Kyaw Lwin News, Premier League 0
ရာသီကြိုကာလရဲ့အခမ်းနားဆုံး International Champions Cup ပြိုင်ပွဲကတော့ မကြာခင်အဆုံးသတ်တော့မှာပါ။ ခြေစမ်းပွဲဆိုပေမယ့် ထိပ်တန်းကလပ်တွေကြားက ပြိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လို့ ဒီဖလားကို ဘယ်အသင်းသိမ်းပိုက်နိုင်မလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲအဆုံးသတ်ချိန်မှာ ရာနှုန်းပြည့်အနိုင်ရလဒ်နဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာဦးဆောင်နေတာက ဘယ်သူမှမထင်ထားတဲ့ ဘင်ဖီကာဖြစ်နေပြီး မန်ယူကလည်း သူတို့ကိုကျော်ကာ ချန်ပီယံဖြစ်ခွင့်တော့ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် စနေညမှာကစားမယ့် အေစီမီလန်နဲ့ပွဲစဉ်ရလဒ်ကတော့ အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်လာဖို့ရှိနေတာပါ။
ပြိုင်ပွဲစည်းမျဉ်းအရ3ပွဲကစားပြီး အမှတ်အများဆုံးရတဲ့အသင်းက ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ဘင်ဖီကာကတော့3ပွဲကစား၊9မှတ်နဲ့ ပွဲကုန်သွားပြီဖြစ်သလို သူတို့ကိုလိုက်မီနိုင်တာဆိုလို့ မန်ယူတစ်သင်းပဲရှိတော့တာပါ။ မန်ယူက အရှေ့2ပွဲမှာ စပါးနဲ့ အင်တာမီလန်တို့ကိုနိုင်ထားတာကြောင့် အေစီမီလန်နဲ့ပွဲမှာသာအနိုင်ရမယ်ဆိုရင် ဘင်ဖီကာနဲ့9မှတ်ချင်းတူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီပြိုင်ပွဲမှာအမှတ်တူနေရင် Head-to-Head ရလဒ်ကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်မှာပါ။
မန်ယူနဲ့ ဘင်ဖီကာတို့က ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခြင်းမရှိတာကြောင့် နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ ဂိုးကွာခြားချက်ကိုကြည့်ကာ အဆုံးအဖြတ်ခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ် ဘင်ဖီကာ ဂိုးကွာခြားချက် +5 ရထားပြီး မန်ယူကတော့ +2 ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာ မန်ယူဟာ အေစီမီလန်ကို အနိုင်ရရုံသာမကဘဲ3ဂိုးပြတ်အနိုင်ရမှသာ ဂိုးကွာခြားချက်တူညီမှာပါ။ တကယ်လို့ အဲဒီလို အမှတ်တူ၊ ဂိုးကွာခြားချက်ပါတူနေမယ်ဆိုရင် သူတို့နှစ်သင်းကစားခဲ့တဲ့ ”ဘုံ”ပြိုင်ဘက်နဲ့ ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရလဒ်ကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ဘင်ဖီကာက အေစီမီလန်ကို 1-0 နဲ့ပဲနိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် မန်ယူဟာ အေစီမီလန်ကို3ဂိုးပြတ်အနိုင်ရမယ်ဆိုရင် ICC ချန်ပီယံဖလားကိုသိမ်းပိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အေစီမီလန်နဲ့ပွဲအတွက် မန်ယူလူစာရင်းမှာ လူသစ်ဝမ်ဘစ်ဆာကာ၊ ဒန်နီရယ်ဂျိမ်းစ်တို့ပါဝင်လာခဲ့ပေမယ့် တိုက်စစ်မှူးလူကာကူနဲ့ အဓိကကွင်းလယ်လူပေါ့ဂ်ဘာတို့တော့ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ လူကာကူကို အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စကြောင့် ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး ပေါ့ဂ်ဘာကတော့ နောက်ကျောဒဏ်ရာပြသနာရှိနေတယ်လို့ ဆိုးလ်ရှားကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားထားပါတယ်။ မန်ယူဟာ ICC ဖလားကို 8 သင်းပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ 2014 ခုနှစ်က ရရှိထားခဲ့ဖူးပါတယ်။
ICC ဖလားနဲ့ မနျယူအောငျပှဲခံနိုငျဖို့ဆိုရငျ မီလနျနဲ့ပှဲမှာ ဘယျရလဒျလိုအပျနတောလဲ…?
ရာသီကွိုကာလရဲ့အခမျးနားဆုံး International Champions Cup ပွိုငျပှဲကတော့ မကွာခငျအဆုံးသတျတော့မှာပါ။ ခွစေမျးပှဲဆိုပမေယျ့ ထိပျတနျးကလပျတှကွေားက ပွိုငျဆိုငျမှုဖွဈလို့ ဒီဖလားကို ဘယျအသငျးသိမျးပိုကျနိုငျမလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားဖို့တော့ကောငျးပါတယျ။ ပွိုငျပှဲအဆုံးသတျခြိနျမှာ ရာနှုနျးပွညျ့အနိုငျရလဒျနဲ့ ထိပျဆုံးမှာဦးဆောငျနတောက ဘယျသူမှမထငျထားတဲ့ ဘငျဖီကာဖွဈနပွေီး မနျယူကလညျး သူတို့ကိုကြျောကာ ခနျြပီယံဖွဈခှငျ့တော့ရှိနပေါတယျ။ အဲဒီအတှကျ စနညေမှာကစားမယျ့ အစေီမီလနျနဲ့ပှဲစဉျရလဒျကတော့ အဆုံးအဖွတျဖွဈလာဖို့ရှိနတောပါ။
ပွိုငျပှဲစညျးမဉျြးအရ3ပှဲကစားပွီး အမှတျအမြားဆုံးရတဲ့အသငျးက ခနျြပီယံဖွဈဖို့ရှိပါတယျ။ ဘငျဖီကာကတော့3ပှဲကစား၊9မှတျနဲ့ ပှဲကုနျသှားပွီဖွဈသလို သူတို့ကိုလိုကျမီနိုငျတာဆိုလို့ မနျယူတဈသငျးပဲရှိတော့တာပါ။ မနျယူက အရှေ့2ပှဲမှာ စပါးနဲ့ အငျတာမီလနျတို့ကိုနိုငျထားတာကွောငျ့ အစေီမီလနျနဲ့ပှဲမှာသာအနိုငျရမယျဆိုရငျ ဘငျဖီကာနဲ့9မှတျခငျြးတူညီသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီပွိုငျပှဲမှာအမှတျတူနရေငျ Head-to-Head ရလဒျကိုကွညျ့ပွီးဆုံးဖွတျမှာပါ။
မနျယူနဲ့ ဘငျဖီကာတို့က ထိပျတိုကျတှဆေုံ့ခွငျးမရှိတာကွောငျ့ နောကျတဈဆငျ့ဖွဈတဲ့ ဂိုးကှာခွားခကျြကိုကွညျ့ကာ အဆုံးအဖွတျခံယူရမှာဖွဈပါတယျ။ လောလောဆယျ ဘငျဖီကာ ဂိုးကှာခွားခကျြ +5 ရထားပွီး မနျယူကတော့ +2 ရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နောကျဆုံးပှဲစဉျမှာ မနျယူဟာ အစေီမီလနျကို အနိုငျရရုံသာမကဘဲ3ဂိုးပွတျအနိုငျရမှသာ ဂိုးကှာခွားခကျြတူညီမှာပါ။ တကယျလို့ အဲဒီလို အမှတျတူ၊ ဂိုးကှာခွားခကျြပါတူနမေယျဆိုရငျ သူတို့နှဈသငျးကစားခဲ့တဲ့ ”ဘုံ”ပွိုငျဘကျနဲ့ ထှကျပျေါခဲ့တဲ့ရလဒျကိုကွညျ့ပါလိမျ့မယျ။ ဘငျဖီကာက အစေီမီလနျကို 1-0 နဲ့ပဲနိုငျခဲ့တာပါ။ ဒါကွောငျ့ မနျယူဟာ အစေီမီလနျကို3ဂိုးပွတျအနိုငျရမယျဆိုရငျ ICC ခနျြပီယံဖလားကိုသိမျးပိုကျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
အစေီမီလနျနဲ့ပှဲအတှကျ မနျယူလူစာရငျးမှာ လူသဈဝမျဘဈဆာကာ၊ ဒနျနီရယျဂြိမျးဈတို့ပါဝငျလာခဲ့ပမေယျ့ တိုကျစဈမှူးလူကာကူနဲ့ အဓိကကှငျးလယျလူပေါ့ဂျဘာတို့တော့ပါဝငျခဲ့ခွငျးမရှိပါဘူး။ လူကာကူကို အပွောငျးအရှကေိ့စ်စကွောငျ့ ခှငျ့ပေးထားတာဖွဈပွီး ပေါ့ဂျဘာကတော့ နောကျကြောဒဏျရာပွသနာရှိနတေယျလို့ ဆိုးလျရှားကသတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာပွောကွားထားပါတယျ။ မနျယူဟာ ICC ဖလားကို 8 သငျးပါဝငျယှဉျပွိုငျတဲ့ 2014 ခုနှဈက ရရှိထားခဲ့ဖူးပါတယျ။